Kusununguka kwemahara mune yakasarudzika mamiriro mune mitengo yezvibereko | Ehupfumi Zvemari
Kusununguka kwemahara mune yakasarudzika mamiriro mune zviyero zvemitero
Hapana mubvunzo kuti shanduko yemitero yakakosha kwazvo kune iyo misika yemari. Mune imwe pfungwa kana imwe, ivo vanozotora danho mukuwana chaicho nguva yakanakisa yekupinda nekubuda mumisika yemari, zviri munyika nepasi rese. Kunyanya zvakadaro mumakore achangopfuura, uko mutemo wezvemari uri kuwana simba rakawanda maererano nemusika wemasheya. Kusvika padanho rekuti kuongorora kwako kuchazonyanya kudikanwa usati waita chero sarudzo yekuita kuti mari ichengetwe.
Nekudaro, meseji inopesana inotumirwa nemabhangi epakati nderimwe rematambudziko makuru anogona kusangana nevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti ivo vanokwanisa kunyange kugadzira imwe yekuviga chiratidzo pane iyo pakati pebhangi zvinangwa yenzvimbo yega yega yezvehupfumi. Kunyanya avo vanobva kueuro zone neUnited States vari kuenda munguva dzakasiyana kwazvo. Nekuita kwakasiyana mumasaga avo, sezvauri kuona mukati memwedzi iyi.
Ehezve, iwe haungambofa wakakanganwa kuti mumakore achangopfuura, epakati mabhanga akakwanisa kudzivirira misika kubva mukuzungunuka. Kubudikidza nekufungidzira kwezvirongwa zvayo pamitero yezvibereko. Kunyangwe kazhinji zviine zvinoratidza izvo zvisingawanzo nyatso chaizvo uye zviri izvo mavambo ekusagadzikana yemisika yemari mune chimwe chikamu mukati megore rino. Saizvozvo, zvinoshanda kusheedzera kutarisa kumisika yemari kuitira kuti vagone kugadzirira mamiriro matsva emutemo wezvemari.
1 Nharaunda dzekufarira: kufarira kwako mumusika wemasheya
2 Anenge emahara kumuka nekuda kwemitero yakaderera
3 Chii chekuita mukuchinja kwetsika?
4 Stock stock mune yekare kondinendi
Nharaunda dzekufarira: kufarira kwako mumusika wemasheya
Zvishoma misiyano yezvehupfumi zvave zvakadaro zvisarudzo mumakore achangopfuura semari yemubereko. Hazvishamisi kuti ndeimwe yekiyi dzemabhegi kusimuka kana kudonha zvine simba mukufamba kwavo. Zvakawanda zvakanyanya kunyangwe icho chinhu pachacho chehunyanzvi kuongorora kweyechokwadi kuchengetedzeka. Kana iwe uchinyatso ziva nezvechiyero chemitero, zvichave zvakanyanyisa kuomarara kushanda nezvigadzirwa zvemari zvinoenderana neyakaenzana. Kwete chete mukutenga nekutengesa masheya mumusika wemasheya, asi mune mamwe akaita semari yekudyara, kutengesa chikwereti kana mvumo, pakati pezvimwe zvakakosha.
Uku ndiko kukosha kwayo kuti pese panenge paine musangano wematare anotonga, kufarira pakati pevamiriri vemari vakasiyana kunosimudzwa. Chii chimwe, nekusiyana kukuru mumitengo yezvivigiro zvinoumba indekisi huru yemusika wemasheya. Icho chinhu icho iwe chaunogona kutarisa zvakanyanya kwazvo panguva yekupedzisira iwo ekupedzisira. Uye izvo zvinogona kukumanikidza iwe kuti uwane kana kurasikirwa nemari mune yega yega mashandiro akaitwa mumisika yemari. Hazvishamise kuti icho chinhu icho iwe chaunofanirwa kutora kubva zvino zvichienda mberi kudzikisira kusava nechokwadi kwemari dzako.
Anenge emahara kumuka nekuda kwemitero yakaderera
Chero zvazvingaitika, chimwe chezviitiko izvo zvakagadzira kuti mitengo yemubhadharo mukondinendi yekare iri nhoroondo dzakadzika ndiko kukurudzira kwakasimba uko kwakapa kuEuropean equities seyakazara. Kusvika pakuti iri mumamiriro ekuenderera mberi nekuwedzera uye kuwanda. Nezvakarongeka zvinotevera izvo zvakashanda kupa vashoma nevepakati varimi mukana mutsva wekudzokororazve mumisika yemari. Chiitiko mune imwe nzira inoshuvira ivo vese, zvisinei nehuremo hwavanopa. Kubva pane ine hukasha kusvika kune yakadzivirirwa yakatemwa uye pamwe pasina zvingasarudzika zvemhando ipi neipi.
Izvi zvakatungamira kunguva yakatsiga mumisika dzese dzeEurope uye zvirokwazvo isingatarisirwe nevamwe vevamiriri vemari. Chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya chii chichaitika kubva zvino zvichienda mberi. Kunyanya, kana shanduko dzinotarisirwa mumitero yezvibereko zvikaitika kune avo vane masimba emari. Semhedzisiro yavo, shanduko huru mukuchinja kana kunyatso kururamisa kupfuura zvakajairwa haina kubviswa. Hazvishamisi kuti, mamiriro ezvinhu auchazofanira kugara nawo pamwe mukota yekupedzisira yegore. Kusvika pakuti iwe unenge usina imwe mhinduro pane kusiyanisa yako nzira yekudyara.
Chii chekuita mukuchinja kwetsika?
Nekudaro, iyo yemamirioni emadhora mubvunzo iwe yauchazvibvunza iwe panguva ino ndizvo zvaunogona kuita kana shanduko iyi muitiro pakupedzisira ikaitika. Zvakanaka, pamwe a tsaona yechinguvana mumisika yemari. Kunyangwe mune chero mamiriro ezvinhu iwe haugone kukanganwa kuti ndiwo mamiriro anogona kuchinja chero nguva. Nokukurumidza kana gare gare, asi hapana mumisika yemari inogara nekusingaperi. Iwe unofanirwa kudzidza kuti hapana chinomuka kana kuwira mukati mehupenyu. Saka kuti iwe ugone kuita muzviitiko izvi, hapana zvirinani kupfuura mamwe matipi akareruka aunogona kushandisa kubva zvino zvichienda mberi.
Iwe uchafanirwa kubata zvigaro zvako chero bedzi iyo tsika ichienderera. Uye hongu, iyo nguva pane chero chiratidzo chekuneta, chichava chikonzero chakakwana chekugadzirisa zvinzvimbo. Zvakanaka pasi pesarudzo kana yakazara mashandiro zvichienderana neprofile iwe yaunounza sediki uye wepakati investor.
Chero bedzi zviyero zvemubereko zvakadzikira sezvazviri nhasi, iwe unozogona kuchengetedza nzvimbo dzako mumakero pasina dambudziko. Zvichava a escudo izvo zvinokudzivirira kubva pakurasika kurasikirwa mukukosha kweaseti yemari. Semuenzaniso, chii chiri kuitika panguva ino mumusika weEuropean stock.
Ndizvo zvikamu zvine hukasha kana masheya avo vane kugona kwakanyanya mune ino yakasarudzika mamiriro ehupfumi. Hazvishamise kuti ndidzo dzinounza kudzoka kwakasimba kwazvo mumisika yemari. Pamusoro pemitemo inofungidzirwa seinonyanya kuzvidzivirira kana zvakananga sehunhu hwekupotera.
ari ngozi kuti nguva idzi nemitero yakaderera yemitero inosanganisira zvakaderera zvakanyanya pane zvimwe zviitiko. Iwe haugone kukanganwa kuti iri pasi peiyo bullish nhungamiro iyo inochengetedza nzvimbo dzevatengi pamusoro peidzo dzakagadzirwa nevatengesi. Izvo hazvisi pasina, ivimbiso huru kuitira kuti utange kuita kwako mumisika yemari.
Iko kusahadzika chete kwaunofanirwa kuve nako padanho raunofanirwa siya zvigaro zvako mumisika yemari. Mupfungwa iyi, yakawanda yenguva inoenderana nekuti nzira yako yekudyara iri kana kana chimiro chaunopa muhukama hwako nenyika inogara yakaoma yemari. Ndokunge, iwe uchave uine yakawanda yekuchinjika kuita yako yekutengesa odha.
ari mazwi ekugara mune izvi zviitiko zvekuenzana ivo vakakwirira kupfuura vamwe. Kazhinji ivo vakatemerwa kune yepakati term, iine kusingaperi kwemwedzi iri pakati pe12 ne18 ingangoita. Saka kuti iwe ugone kukwidziridza mashandiro ako, uchafanirwa kutsvaga hunhu hunokodzera zvakanyanya aya akakosha mamiriro pamusika wemasheya.
Iwe unofanirwa zvakare kuyeuka kuti nemitero yepasi yakaderera unogona kuva nehasha zvakanyanya mune chero mashandiro aunoita mumisika yemari. Kunyangwe nematanho iwe ausingakwanise kufunga mune mamwe marudzi ezviitiko. Iwe unogona zvakare kuisa mari yako mune mamwe madhipatimendi akasarudzika, senge kufonera, tekinoroji nyowani kana zvemagetsi zvekutengeserana.
Stock stock mune yekare kondinendi
Ehezve, marongero ese aya anoitirwa chiitiko chakadai seicho chiripo muEurope. Nekudaro, iri kupera sezvo maCommunity monetary authority vari kutopa iyo kutanga ziviso nezve shanduko kubva pamitemo yazvino. Kune kutaura kuti zvinogona kuitika mukota yekupedzisira yegore. Kana mune yakaipisisa kesi, mukati memwedzi yekutanga yegore rinotevera remari. Icho chiitiko chitsva icho iwe chaunofanira kufunga kubva ikozvino
Chero zvazvingaitika, zvichave zvakakodzera kuti iwe uzive dzese nhau dzinogadzirwa mune iyi kondinendi yekare. Saka kuti iwe ugone kusiyanisa kana kugadzirisa yako yekudyara portfolio chero nguva uye mamiriro. Kuti zvive saizvozvo, iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekuve kunyanya kugamuchira kufamba izvo zviri kutora nzvimbo mumitumbi inokwanisa. Hazvishamise kuti ivo vachange vachikupa inopfuura imwe tsananguro uko kupfura kuchaenda mune ino pfungwa. Nechinhu chakakura kwazvo kuti ugone kuita sarudzo dzako nenzira kwayo uye nemazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Hapana mubvunzo kuti harizove basa rakareruka, asi na kuedza kushoma Uye neimwe mhanza unokwanisa kuzadzisa zvinangwa zvako zvekudyara. Zvekuti nenzira iyi, kuita purofiti inobatsira zvinobudirira haisi utopia, kure nazvo. Icho chiri shure kwezvose chimwe chezvinangwa zvaunofanira kuzviisa iwe munyika yemari nekudyara. Zvese zvine chekuita nekutengwa nekutengeswa kwemasheya pamusika wemasheya, pamwe nekubvumirana kwezvimwe zvigadzirwa zvemari (mari yekudyara, kiredhiti kana kutengesa kwakarongeka, pakati pezvakanyanya kukosha).
Mubairo wacho hauzove mumwe kunze kwehutano hwakanaka muakaunti yako yekutarisa semhedzisiro yemabasa akarongwa zvirinani kubva pakutanga. Iwe hauzove nesarudzo asi kutevedzera kuitira kuti unakirwe nemari inowanikwa gore rega. Chokwadi chichava kukurudzira kwausingazokwanise kusiya kubva panguva ino zvichienda mberi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kusununguka kwemahara mune yakasarudzika mamiriro mune zviyero zvemitero
Sarudzo dzekuGerman dzinokanganisa sei musika wemasheya?
Chii chinonzi Euribor